Maxaa sababay kala duwanaashiyaha dadkii uu Saameeyay Qaraxii Soobe? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa sababay kala duwanaashiyaha dadkii uu Saameeyay Qaraxii Soobe?
Tirada dadkii ku waxyeeloobay Qaraxii Arxan-laawayaasha Al-Shabaab ay ka geeysteen 14 Oktoobar 2017 Isgoyska Zoobe ayaa loo sheegay siyaabo kala duwan, waxaana warbaahinta madaxa bannaan ay isku khilaafeen tirada dadkii ku wax ku noqday.
MUQDISHO - Soomaaliya - Saameynta Qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho saddex sano kahor maanta oo kale waxa uu ahaa mid aan la xaqiri karin, dad badan oo dan-yar ahna ay ku geeriyoodeen halkaas. Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka war bixisay dhibaatada meesha ka dhacday, AUN wasiirkii warfaafinta ee xukuumaddii xilligaas jirtay Eng. Yariisow ayaa sheegay tiro aad u yar.
Guddi ay magacaawday Dowladda Federaalka Soomaaliya oo loogu magac daray guddiga gurmadka qaranka oo uu Guddoomiye ka ahaa Prof. Shirwac ayaa iyagana waxay soo saareen tiro kale oo ka badan tii Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya ay shaacisay, taaso aheyd 578 qof oo dhimasho ah, halka 316 kale ay ku dhaawacmeen.
Waxaa jiray guddi madax bannaan oo dhallinyaro is xilqaantay ay sameysteen, kuwaas oo kaashanaya isbitaalada dhaawacyada la geeyay islamarkaana baafinayay dadka maqan ayaa iyagana waxay sheegeen tiro ka duwan kuwii hore, waxayna ahayd tiro aad u badan oo suurta-gal nimadeeda wax xaqiijin kara aanay jirin.
Keydmedia Online oo u-dhaba gashay xaqiijinta warkaas islamarkaana isha ku haysay ayaa warbixin dheer waxay ka diyaariyeen dhacdadii 14 Oktoobar ee aadka u xanuunka badneed.
Keydmedia waxay heshay macluumaad ku saabsan in dhaawacyada dibadda loo qaaday qaar kamida ay ahaayeen dad isbitaalada horay ujiifay, kuwaasoo lagu daray dhaawacyadii halista ahaa ee dibadda loo qaaday. Sidoo kale waxaa la sheegay qoys loo diiwaan geliyay tiro kamida qoyska oo goobta ku geeriyootay, balse xaqiijin dheer kaddib waxaa la ogaaday in maalma kahor qaraxa ay geeriyoodeen xubnaha qoyska ee lagu daray dadkii ku naf waayay Qaraxa.
Waxey Keydmedia Online go'aansatay in tira-koobka rasmiga ah ee ay soo saareen guddiga gurmadka qaranka qaadato maadaama aysan ku jirin wax ka badbadin ah.